Mamelona olona anarivony : miangavy ny hanokafana ny Golden Center ny mpivarotra | NewsMada
Mamelona olona anarivony : miangavy ny hanokafana ny Golden Center ny mpivarotra
Mahatsiaro ho sahirana ireo mpivarotra marobe miasa ao amin’ny Golden Center satria mbola mikatona hatramin’izao ny toeram-piasan’izy ireo. Manaitra ny sain’ny mpitondra izy ireo fa mamelona olona marobe izany. Betsaka ireo efa tojo fahasahiranana amin’ny fiainana andavanandro vokatry ny fikatonana.
Miangavy ny tomponandraikitra mahefa eto Antananarivo mba hanokatra indray ny toeram-pivarotana 400 ao amin’ny Golden Center izay nakatona nanomboka ny 3 marsa lasa teo ny mpivarotra. Nisy ny fivoriana niarahan’izy ireo, omaly, ary nilazany tamin’ny mpanao gazety ny hetahetany. Iankinan’ny fiainan’ny olona maro ny toeram-pivarotana satria antom-pivelomana rahateo. « Mampiasa olona tsy latsaky ny efatra ny efitrano fivarotana iray ka mahatsiaro ho sahirana ireo mpiasa, misy mihitsy aza ny efa very asa », hoy ny fitarainana azo omaly teny Behoririka. Tsy vitsy ireo mpivarotra nifampiraharaha amin’ny banky sy ny ivontoerana findramam-bola ary tokony hamerina ny vola isam-bolana. Vokatry ny fikatonan’ny toeram-pivarotana anefa, taorian’ny fahamaizana niseho ny 14 desambra lasa teo, tsy afaka miasa mihitsy izy ireo ka sahiran-tsaina tanteraka.
« Misy ny dingana nangatahin’ny kaominina ataon’ireo mpivarotra ary notanterahina avokoa izany nefa mbola tsy nisy ny valin-teny matotra amin’ny daty hisokafan’ny toeram-pivarotana indray », hoy ny solontenan’ny mpivarotra, Seheno. Sinoa ny tompon’ny toeram-pivarotana fa Malagasy, teratany afrikanina maro no miasa ao anatiny. Nilaza ny Afrikanina mpivarotra iray fa voahidy ao amin’ny toeram-pivarotana ny pasipaorony nefa tena ilainy ka miangavy izy ny hanokafana ny fivarotana.
Afaka niasa ihany izy ireo fa andro vitsy monja ny volana janoary sy febroary, nakaton’ny kaominina tanteraka anefa ny Golden Center ny 3 marsa lasa teo ary mbola tsy nisokatra hatramin’izao. Nilaza ny tomponandraikitry ny kaominina fa misy ny fitsirihana teknika tsy maintsy atao taorian’ny fahamaizana niseho farany teo. Lamba, kiraro, kojakoja ampiasaina amin’ny vatana, finday… ny entana amidy ao.